I-Cashew, izibonelelo kunye neepropathi zeziqhamo ▷ ➡ Discover Online ▷ ➡️
I-cashew sisiqhamo esikweleenjiko, esizalelwe eBrazil kwaye sinokubonakala sityheli, sibomvu okanye pinki, zonke iinguqulelo zayo zinesondlo kakhulu. Ijusi yayo ithandwa kakhulu kwilizwe liphela, nangaphezu kwesiqhamo ngokwaso.
1 Izibonelelo zeCashew
1.2 Igcwele ii-antioxidants
1.3 Umthombo wamandla
1.4 Inceda ekuphiliseni
1.5 Ulawulo lwesalathiso se-glycemic
2 Ngaba i-cashew iyancipha?
4 Itheyibhile yesondlo seecashews (100 grams)
Amandongomane e-cashew alunge kakhulu ekukhuseleni umzimba kuba ngumthombo wevithamin C. Ke ngoko, iyanceda ukulwa umkhuhlane kunye nokubanda. Ikwanqanda ukudumba kunye nosulelo ukusasazeka kuwo wonke umzimba.
Iziqhamo zaseTropiki zikwacebile kwii-antioxidants, ukongeza ekuthinteleni ukuguga ngaphambi kwexesha kolusu, kunceda ukuthintela izifo zentliziyo kunye nomhlaza.
Ukongeza ekusiboneleleni nge-chestnut emnandi, icashew ngowona mthombo wamandla. Yiyo ke loo nto inyusa amandla enqatha ukuba asetyenziswe njengomthombo wamandla emzimbeni.
Njengokuba uninzi lwezibonelelo bezingonelanga, ikwanceda kwinkqubo yokuphilisa. Ke, ngenxa yokuba ityebile ngobhedu, iyimfuneko ekwenziweni kwe-collagen, kunye nevithamini K, ephucula ukujiya kwegazi. Ngale nto, iipropathi zeziqhamo zisebenza kunye namajoni omzimba ekuvuseleleni komzimba.
Ulawulo lwesalathiso se-glycemic
Ukuba yimicu, kuyanceda ukufunxwa kancinci kweecarbohydrate, ekwan negalelo ekubeni ngumthombo obalaseleyo wamandla. Yiyo loo nto ithintela i-insulin spikes kwaye ilawula isalathiso se-glycemic kakuhle. Ke ngoko inamanqanaba afanelekileyo e-fructose, kodwa ayisiyongxaki lo gama nje isetyenziswa ngokumodareyitha.
Ngaba i-cashew iyancipha?
Njengamaxesha onke, kuyimfuneko ukuphinda-phinda ukuba akukho kutya okunye kunamandla okunciphisa umzimba. Nangona kunjalo, njengoko sisiqhamo esinomxholo we-fat low, sinezondlo ezibaluleke kakhulu kwaye sithanda imvakalelo yokugcwala emzimbeni. Ke ngoko, kufanelekile ukongeza ekutyeni ukuba ufuna ukunciphisa umzimba.
I-cashew sisiqhamo esinezixhobo ezininzi kwaye sinokudliwa ngeendlela ezininzi. Ezona fom zixhaphakileyo zintsha kunye nejusi. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba izinto ezintsha zingenamida, inokuthi:
Ithathwe ngendlela yesosi (uhlobo lweChutney)
Itheyibhile yesondlo seecashews (100 grams)
IiCarbohydrate: 10,3 g
Vitamin C: 219,3mg